LMMS, ngwa eji eme egwu, na - enweta mmelite ọhụrụ ka afọ anọ gachara | Site na Linux
LMMS, ihe eji eme egwu, na-enweta mmelite ọhụrụ mgbe afọ 4 gachara
Ngwá ọrụ mepụtara egwu na-emeghe bụ LMMS natara mmelite ọhụụ mgbe afọ 4 gachara.
Previousdị nke gara aga nke ngwa ọrụ a maka ndị egwu bụ LMMS 1.1.3 ma wepụtara ya na 2015. Ugbu a abịa LMMS 1.2 na ọtụtụ ndozi, akụkọ na idozi.
Ozugbo a na-akpọ onye na-akwụ ụgwọ bụ Fruityloops (FL Studio) n'efu, LMMS etolitela bụrụ nnukwu ngwa ọrụ maka ndị egwu nwere njirimara nke ha. Ngwa nwere a nnọọ kensinammuo interface, dị iche iche ngwá ọrụ na a akụ na ụba nke atụmatụ gụnyere nkwado maka ngwa VST.
Kedu ihe dị ọhụrụ na LMMS 1.2
Site na LMMS 1.2 otu ahụ mepụtara ntọala siri ike na afọ anọ nke ndozi, mmelite na isi atụmatụ na atụmatụ ọhụrụ na interface.
Na LMMS 1.2 anyị hụrụ egwu ohuru, egwu ngosi ohuru, nhazi nhazi na ihe ngosi di iche iche, mmekorita VST nyeere na ndabara, meziwanye mbubata na mbupụ MIDI dị mma, ndepụta nchịkọta akụkọ, n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
N'ihi na Linux ọrụ kpọmkwem App Image nkwado gụnyere, na ndozi maka 32-bit VST na 64-bit Linux nwere mmekọrịta VST. Igwe okwu na arụ ọrụ ugbu a site na ngosipụta HiDPI.
LMMS bụ n'efu ma dị maka Windows, MacOS na Linux, ị nwere ike ibudata ihe nrụnye na akwukwọ ọrụ. Ndị ọrụ Linux nwere ike ịnweta nkwuputa a kachasị ọhụrụ dị ka onyonyo App, nke na-enye ohere ịnweta akpa yana ntụkwasị obi niile dị mkpa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » LMMS, ihe eji eme egwu, na-enweta mmelite ọhụrụ mgbe afọ 4 gachara
Versiondị ọhụrụ nke KDE Plasma 5.16 bịarutere na ndị a bụ akụkọ ya
Banyere Onyonyo: Ebe kachasị mma na n'efu na 2019